I-Xubuntu 21.10 yenze ukwazisa ngokusesikweni, ifika ngeXfce 4.16 | Ubunlog
I-Xubuntu 21.10 yenze ukwazisa ngokusesikweni, ngePipewire kunye nezinye iindaba
IPablinux | 15/10/2021 14:37 | Xubuntu
Benze ukwazisa ngokusesikweni emva kwexesha kunokuba bekulindelwe, kodwa khange babe ngabokugqibela. Andazi ukuba kutheni bathathe ixesha elide ukuhlaziya iwebhusayithi yabo, kwaye, bekunye noKubuntu, oza kuyenza imini yonke, bahlaziye ulwazi esele lukhona namhlanje, ngolwesiHlanu we-15 ka-Okthobha. Iqela eliphuhlisa incasa yedesktop yeXfce likhutshiwe IXubuntu 21.10, kwaye iza neendaba ezifana Linux 5.13, Isiseko ekwabelwana ngaso luphela usapho lwe-Indish Indri.
Uluhlu lwe-Xubuntu 21.10 Impish iindaba ze-Indri abazibonisileyo azinabisi kakhulu, zimfutshane kakhulu kangangokuba zibandakanyile ezintathu kuphela njengoko kubonisiwe. Zonke, okuninzi kokutsha kunxulumene nemeko yemizobo kunye nekernel, leyo kunye neFirefox 93, hayi kangako ngenxa yeempawu ezintsha zesikhangeli seMozilla, kodwa ngenxa yohlobo lwephakheji efakwe ngokungagqibekanga.
I-Xubuntu 21.10 Impish Indri Iimbalasane
Isoftware entsha: Ngoku kuza kufakwa kwangaphambili nge-GNOME Disk Analyzer, i-GNOME Disk Utility, kunye neRhythmbox. I-Disk Analyzer kunye neDisk Utility yenza kube lula ukubeka iliso nokulawula izahlulelo zakho. Rhythmbox yenza ukuba umculo udlalwe kunye nelayibrari yemithombo yeendaba ezinikeleyo.
Umbhobho ngoku ubandakanyiwe kwiXubuntu, kwaye isetyenziswa ngokudibeneyo nePulseAudio ukuphucula ukudlala kwakhona komsindo kunye nenkxaso yehardware kwiLinux.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo: Iqhosha leSuper (Windows) ngoku liza kutyhila imenyu yezicelo. Iindlela ezimfutshane ezikhoyo + ezimfutshane azichaphazeleki.
IFirefox 93 kuhlobo lwe-DEB. Ukuba ezi ziindaba, kungenxa yokuba Ubuntu 21.10, eyona nguqulelo iphambili, itshintshele ekusebenziseni iphakheji ye-snap ngokungagqibekanga. Kwi-22.04, zonke iincasa ezisemthethweni ziya kudinga ukusebenzisa iphakheji ye-snap.
Okwangoku, nangona behlaziyile iphepha elisemthethweni ngolwazi olutsha, ukuze Khuphela i-ISO ukusuka kwiXubuntu 21.10 kuya kufuneka uye esi sixhobo. Kwi-xubuntu.org bayaqhubeka nokubonelela ngomfanekiso omtsha ovela kwi-21.04. Kungekudala bazakuqhagamshela kuhlobo lwe-21.10 olukhutshwe izolo kwaye lwenziwe ngokusemthethweni kwimizuzu embalwa edlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Xubuntu » I-Xubuntu 21.10 yenze ukwazisa ngokusesikweni, ngePipewire kunye nezinye iindaba
UKubuntu 21.10 wenza ukwazisa ngokusesikweni ngePlasma 5.22.5 kunye neGear 21.08
Izinto oza kuzenza emva kokufaka Ubuntu 21.10 Impish Indri